Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဧပြီလ 21, 2018
ဟိုတယ်အလုပ်များ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နှင့် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ယခုအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီခြင်း သီရိလင်္ကာ၌တည်၏။ ယခုကြှနျုပျတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအများအပြားကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ် တစ် CV ကိုရဲ့ကိုလက်ခံရရှိမှ forward။ အထူးသဖြင့်သီရိလင်္ကာကနေအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသူများအနေဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအာရှအခြေစိုက်နေသောကုမ္ပဏီများနှင့်အတော်ကြာကန်ထရိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
သီရိလင်္ကာတွင်အလုပ်ရှာရန်သည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သီရိလင်္ကာရှိအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေသည်။ The ဒူဘိုင်း စီးတီးကုမ္ပဏီ အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်။ ကျိန်းသေထောက်ပံ့ အာရှတိုက်မှာအလုပ်ရှာဖွေမှုများကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့သီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရန်သင့်ကိုလမ်းပြဖို့ကြိုးစားပါ။ Srilanka တွင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုသင့်လျော်သောလမ်းရဖို့။ ထို့အပြင်ထိုအစိတျအပိုငျးအချိန်အလုပ်အကိုင်များ, ကျွန်တော်တို့ဟာထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုရေးသားနေကြသည် သီရိလင်္ကာစာချုပ်များနှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများ။
သီရိလင်္ကာအလုပ်နေရာလွတ်ဘို့, သင်အတော်ကြာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ်။ မှ ကျွောငွာက်ဘ်ဆိုက် သငျသညျရရှိနိုင်ရာထူးများအတွက်သီရိလင်္ကာအွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျတယျ။ သို့မဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတူ CV ကိုအဆိုပြု post ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျသီရိလင်္ကာအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ သငျသညျမေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဖိုရမ်များတခြားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများဝေမျှသင့် လမ်းလျှောက်-in ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းစာအုပ်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစား.
သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးပြည်ပရှိဖြစ်နိုင်သည် ?. သငျသညျအာရှတှငျနထေိုငျနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေပါသည်။ သီရိလင်္ကာ၌, သင်ပင်အခြိနျပိုငျးနှငျ့လေ့လာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ သငျသညျနေ့စဉျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည် သီရိလင်္ကာ၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ သီရိလင်္ကာဒေသခံလုပ်သားများအတွက်ကုမ္ပဏီလမ်းညွှန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နှင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေကြသူလူများအတွက် Srilanka မှ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးထွက်ရှာတွေ့သည်။ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သင်တို့အဘို့အသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အ ?.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလုပျသမားမြားအတှကျလမျးညှနျပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့ဘယ်လောက်နဲ့တူခေါင်းစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအာရှအတွက်သင့်လျော်သောအိမ်ရာကိုရှာ။ ဘဏ္ဍာရေးအတွက်ဂျော့ဘ် ထိုကဲ့သို့သောသီရိလင်္ကာဘဏ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအသိုင်းအဝုိင်း join ပေးပါ။ ထိုအသင်တို့ကဲ့သို့လူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ရ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ဖမ်းပြီးအဘို့သင့်အတှေ့အကွုံဝေမျှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Careers များအတွက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
မည်သို့ကြောင့်သီရိလင်္ကာမှာနေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ?. သငျသညျသီရိလင်္ကာများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြသောအခါ။ သင်တစ်ဦးကြီးမားသောအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းရှိကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာဖွေဒီတိုင်းပြည်ကနေလူတွေဒါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူတိုင်းမယ့်အလုပ်ရရှိသွားတဲ့။ ပိုကောင်းတဲ့ပညာရေး, အများကြီးပိုကောင်းသင်တန်းများရဖို့ကြိုးစားနေသောလူဒါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်အများစုကိစ္စများတွင်ပါကအများကြီးကူညီမပေးပါ။
ဒေသခံအလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုဟာကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကောင်းသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ သင်သည်အခြားများစွာသောသီရိလင်္ကာလုပ်သားများအတွင်းသင်၏လျှောက်လွှာကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်အာရှအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့လူတွေကအများကြီး။ အများအားဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည် ကောင်းသော Srilanka အတွက်အလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေ။ ဒါ့အပြင်သီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေကြသူဒေသခံဘွဲ့ရကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပင်ဤတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည် အံ့သြဖွယ်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိရေတွင်းတစ်ဦးညာဘက်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ paid ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုင်းပြည်ကကြီးထွားလာနေတုန်းပဲ နေရာ ဘို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု။ သီရိလင်္ကာအစိုးရအဆိုအရ, စီးပွားရေးများအတွက်အာကာသရှိသေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်, 2018 အတွက်သူတို့လုပ်ကိုင်ဖို့မထိုက်မတန် 9.7 လူဦးရေသန်းခန့်မှန်းပါတယ်။ အဓိကဒေသစစ်တမ်းများအလုပ်ရှာဖွေသူများနေဆဲဒေသခံတစ်ဦးအလုပ်သမားဖြစ်ဆက်လက်။ စီးပွားရေးသီရိလင်္ကာများအတွက်လုပ်သားအင်အားအဖြစ်သီရိလင်္ကာများအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, 90% လူဦးရေထက်ပိုမိုပြီးသားအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ လူများအရာကြွင်းလေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြသို့မဟုတ်နေဆဲလေ့လာတယျ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ယခုနှစ် 4.20 များအတွက်ရာခိုင်နှုန်း 2018 ထက်လျော့နည်းသည်။
ဒီတိုင်းပြည်ကိုလည်းစီးပွားရေးဧရိယာ၌၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, အသစ်သောစီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲပေါင်းများစွာကုမ္ပဏီများမှ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ။ ထိုသူတို့ကယခုနှစ် 2000 ကနေစီမံခန့်ခွဲကိုစတင်ပါ။ အလုပ်လက်မဲ့နှင့် ပတ်သက်. ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာတုနျး။ ထိုအခါသူတို့ကသိသိသာသာသက်ရောက်မှုဖြစ်စေကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုထုတ်တွက်ဆ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနေဆဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတိလူဦးရေအလုပ်သမားတစ်ဦးခက်အချိန်ရှိပါတယ်။ သူတို့အခြို့သောကန့်သတ်အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီ အသစ်ရောက်ရှိလာနိုင်ငံခြားသားများများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ.
တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖြစ်သီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှာဖွေခြင်း။ လုပ်ဖို့ဒီတစ်ခါလည်းအတော်လေးခက်ခဲတာဝန်များကို, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ, အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအတော်လေးအလွယ်တကူဤတိုင်းပြည်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာဖြစ်ကြောင်း။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်သင်ဟာသီရိလင်္ကာမှာလုပ်အားပေးအဖြစ်အခွင့်အလမ်းတွေအားလုံးမှာလုပ်နိုင်တယ်။ ကမ်းလှမ်းချက်များစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် သင်ပေး အင်္ဂလိပ်။ သင်အများကြီးပိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုပြသအများစုမှာဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားများ။ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်။
သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် နိုင်ငံခြားပြည်တော်ပြန်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ဥရောပ။ သေချာပါလိမ့်မယ် အများဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုစတင်ရန် ဆက်ဆက်အများကြီးပိုမြန်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်မန်နေဂျာများအတွက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, သီရိလင်္ကာ၌ဤအလုပ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, သူတို့ကအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
တော်တော်များများရှိပါတယ် သီရိလင်္ကာကုမ္ပဏီများမှ သင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ပါသည်သော။ ဟုတ်ပါတယ်, သီရိလင်္ကာခရီးသွားဧည့်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကြောင့်သီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန်ကျိုးနပ်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူလူတွေအများစုနေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လျှောက်ထား။ ပင်ဒူဘိုင်းကနေအများဆုံး, များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများ။ ထားရှိခြင်းလေ့ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကဏ္ဍများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေရန် ထိုကဲ့သို့သောဧည့်ဝတ်ပြုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို့သောအဖြစ်။ ဒါပေါ့, သငျသညျအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် စီးပွားကူးသန်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကျော်ရှာတှေ့နိုငျလည်းကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များ။ အောက်ပိုင်းကဏ္ဍများအင်ဂျင်နီယာ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်ဖြစ်ကြသည်။
ဒီတိုင်းပြည်အတွက်အသက်တာ၏အဆငျ့ဖြစ်ပါသည် ဒေသခံတွေအတွက်လုံလောက်သောအကောင်း။ ဒါပေမဲ့လစာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။ သငျသညျသီရိလင်္ကာမြင့်မားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်မရရင်တောင်။ သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့စီးဆင်းလွန်းပိုက်ဆံမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။
ဒါကြောင့်အများဆုံးအနောက်နိုင်ငံများမှမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော Operating စျေးကွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငွေကိုကြောင်းမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တစ်ဦးမှအကြီးတန်းအမှုဆောင်အဖြစ်အလုပ်ရနိုင်။ ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဥပမာ။ သငျသညျအများကြီးပိုစေမည်နှင့်သေချာဘို့ဤနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျသီရိလင်္ကာရှိအလုပ်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ Srilanka အတွက်ဂျော့ဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုပြု၏။ နှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ။ သင် ... သင့်တယ် အာရှတိုက်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေ။ အထူးသဖြင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်။
သငျသညျအလုပ်အကိုင် start အခါ။ ကျိန်းသေ, သင့်လစာတစ်ဦးအဆင်ပြေလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဖုံးကိုသငျ့သညျ။ ကောင်းတဲ့အိမ်နှင့်အကောင်းတစ်ကားကိုထားရှိခြင်း။ အဆိုပါ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်းနေကြ ဤတိုင်းပြည်တွင်။
ဤရွေ့ကား, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့ဒေသခံလုပ်သားများအများကြီး။ အဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သီရိလင်္ကာတွင်နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်၏။ ဒါဟာအသက်ရှင်ဖို့အံ့သြဖွယ်ရာအရပျဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်သိသိသာသာ သငျသညျကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာနေရာကောင်း။ အိန္ဒိယကနေအများကြီးပိုလွယ်သည် အလုပ်တစ်ခုရဖို့ သီရိလင်္ကာ၌အခြားနေရာများထက်။ အပြုသဘောဘက်မှာ၊ သင်သည်သီရိလင်္ကာတွင်လည်းအလုပ်တစ်ခုရနိုင်ပေသည် ကောင်းစွာ-paid အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူဥပမာ။ ထိုအခါချေသောကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းအများဆုံး မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံခြားလစာတစ်ဦးစံနိမ့်လစာနှိုင်းယှဉ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအဘယ်သူမျှမဂျော့? ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Start
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည်သီရိလင်္ကာတွင်နေထိုင်ပါကသင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်ရှာပါ ဒူဘိုင်းမှာ။ ငါတို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေသူကူညီပေးနေကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်သီရိလင်္ကာကနေဂျော့ရရန်။ ကျွန်တော်တို့၏ အလုပ်ရှာဖွေ၏ system ကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ် လူတွေကိုယူအေအီးမှာအလုပ်ရအောင်ကူညီပေးနေတယ် စော်ဘွား။ အိန္ဒိယမှလာသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီရှာဖွေသူအများစုသည်။ ဒူဘိုင်းရှိသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအတွက်အလုပ်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကူညီနေပါသည်။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ။ ညီညွတ်သောအာရပ်သင်တို့အဘို့နေရာလွတ်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ အထူးသဖြင့်အဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာနေကြသူတစ်ဦးကလူအဘို့နှင့် Sharjah။ သငျသညျသီရိလင်္ကာမှသည်လျှင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များအတွက်နေရာနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပြီးသား ပါကစ္စတန်ကနေအောင်မြင်စွာထားရှိလူတွေ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုသင်အားမရမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်လိုအပ်သမျှအပြည့်အဝအလုပ် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့သင်သည်တတ်နိုင်လျှင် သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီး ငါတို့မှာ အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင် အပိုင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် WhatsApp ကို အလုပ်အုပ်စုများ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကနေစုဆောင်းမှုတောင်းဆိုမှုကိုယူပြီး။ ထို့နောက်၎င်းကိုလူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် WhatsApp ကိုအုပ်စုများ။ ဒါနောက်တစ်ခုပါ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့၏စမတ်လမ်း။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့လူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်.
မှစ. Choose ဖို့ Careers ဘာတွေလဲ
သင်ကိုယ်တိုင်မမေးသင့်ကြောင်းအခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းများကို၏ပထမဦးဆုံး။ တစ်ဦးဟိုတယ်ငါ့အဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြှနျုပျအဘို့ကောငျးသလဲ။ အဲဒီနှစျခုကဏ္ဍများသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့အလုပျအတှကျအဓိကဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်, သင့်ကိုယ်သင်မေးသင့် အရာ type ကိုအလုပ်၏အကြှနျုပျအဘို့မှန်သည် ?. ငါပင်ကဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည် ?. သစ်တစ်ခုထက်ပိုလတ်ဆတ်လူတစ်ဦးအဘို့ဤစူပါအရေးကြီးသောဖြစ်သင့်သည်။ ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေသည် ဖြစ်. သင်၏အသက်တာအတွက်အဓိက changer။ သငျတို့သညျငါ့ကိုအဘို့အဘယ်သို့ယင်း၏မထိုက်မတန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ။ အဘယ်သို့ငါကမစတင်ပါသနည်း
သို့သော်အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုအဘို့, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဖြစ်စဉ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ယင်းထက်ပိုလတ်ဆတ်အများစုဟာသင့်ပါတယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစတင်ရန် အထက်တန်းကျောင်းနှစ်တာကာလအတွင်း။ ဒါ့အပြင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသဘာဝစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကိလေသာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စတင်ကတည်းက။ သငျသညျတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရပါမည် အတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေသောအခြားလူနှင့်အတူ။ သူတို့ထဲကတချို့ကတကယ်သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်ခြေထိတွေ့ကူညီနိုင်သည်။ အဲဒီကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသင့်မိသားစုသို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်, သငျသညျအလုပျအတှကျရှာကြသည်လျှင်။ သငျသညျအလွန်အမင်းကိုပြင်ဆင်ပထမဦးဆုံးအလုပ်မှီရပါမည်။ ကျနော်တို့ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်တခုကိုကြောင်းကိုငါသိ၏။ သင်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရာကိုသိဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အများစု၏သို့သော်အများဆုံး။ ယေဘုယျအလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်နေမဟုတ်ဘဲတိကျတဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့။ သို့သော်စိတ်ထဲ၌ဤအတူတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်ရေးအဆုံးသတ်မထားဘူး။ သင်တစ်ဦးကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ဒီဂရီရယူကတည်းက။ ကောင်းသောအဆင့်နှင့်အတူ, သင်၏တဦးတည်းရှိနိုင်ပါသည် အလုပ်အကိုင်များကိုကျွန်တော်တကယ်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပေးနေကြတယ်.
သင့်ရဲ့ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ သင်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်သီရိလင်္ကာ၌အဘယျအလုပျဆုံးဖြတ်ခင်မှာ။ အသစ်ကဘွဲ့ရသောကြောင့် မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ရှာဖွေနေ။ နှင့်တပြင်လုံးကိုဒီနိုင်ငံကနေလုပ်သားအင်အားဝင်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Find ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။
Srilanka ဟိုတယ်များစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်အများအပြားဟိုတယ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ အရောင်းအနေအထား၌တည်၏။ သို့သော် Srilanka အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုတစျဦးဖွစျသညျ စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူး။ ကြှနျုပျတို့သညျဤတိုင်းပြည်ကနေအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူပါလိမ့်မယ်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆဲသောကြောင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိန်းသေပရဒိသုတှငျနထေိုငျ Srilanka အတွက်အသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်။ Srilanka တှငျကြှနျုပျတို့များမှာ အတူအလုပ်လုပ်ရန်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်ရှိခြင်း။ ထိုအခါဟိုတယ်အများစုဖြစ်ကြသည် ငှားရမ်း။ ဒေသခံတွေအဘို့အကြီးမားတဲ့ငှားရမ်း option ကိုရှိပါတယ်။ အခြေခံကနေလေ့ကျင့်ရေးလုပ်သားများအပေါ် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအထိ။ Srilankan ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းကြောင်းအားလုံးသည်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အများအပြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ အထူးသဖြင့်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေသူတို့နှင့်အတူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်အကိုင်ရှာမတှေ့နိုငျပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဟိုတယ်များအတွက်အတော်လေးကောင်းသောသုတေသနပြုတော်မူပြီ ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှ သီရိလင်္ကာ၌တည်၏။ သငျသညျဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသီရိလင်္ကာငှားရမ်းဘာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းထက်လည်းပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည် သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကဝမျးသာ သီရိလင်္ကာ၌တည်၏။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာငါတို့လမ်းညွှန်မှာကြည့်ရှိသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Jetwing ဟိုတယ်ဂျော့မှာအလုပ်အကိုင်များ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Jetwing ဟိုတယ် အလုပ်လုပ်မယ့်ပထမဦးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီအသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိတွေအများကြီးငှားရမ်းသည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူသီရိလင်္ကာရှိစွန့်စားမှုစတင်နိုင်ပါသည်။ သီရိလင်္ကာရဲ့အဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကြိုးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုမှာ။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အများကြီးပိုမြန်ကြီးထွားအောင်ရှာဖွေနေ။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုဂျက်တောင်ပံဟိုတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ Jetwing ဟိုတယ်များကျွန်းရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်တယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ဒီကုမ္ပဏီနှိပ်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများတွေအများကြီး.
သူတို့နှင့်အတူသငျသညျအမြားဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးရနိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျသဘာဝကအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောငွေရှာ။ ဒီကသင်၏ပစ်မှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ?. ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျအစဉျအမွဲမှုတ်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, Srilanka အတွက်, ဒီဟိုတယ်ကောင်းကောင်းရေရှည်များအတွက်လူသိများသည် အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဧညျ့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ။
Jetwing ဟိုတယ်မှာ, သီရိလင်္ကာဧညျ့၏အိမျဖွစျဖို့ဂုဏ်ယူထက်ပိုပါတယ်။ အဆိုပါ Jetwing ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည် ကူညီခြင်းလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့တိုင်းအသစ်ကလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရအဖွဲ့ဝင် supporting ၏အရေးပါမှုကိုယုံကြည်လို့ပဲ။ အဆိုပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူက start ့ကျိုးနပ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေသီရိလင်္ကာများတွင်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေမည်။
အဆိုပါသစ်ကြံပိုးဟိုတယ်အားကြီးသောဒေသဆိုင်ရာရှိနေခြင်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများအများအပြားအလုပ်လုပ်ကိုင် မိမိအအမှတ်တံဆိပ်အတူ။ သီရိလင်္ကာတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်, ဒီဟိုတယ်ဟာအတော်လေးစမတ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်။ ကုမ္ပဏီ အသစ်သောစီမံကိန်းများကိုအများကြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုမြင့်မားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ သူတို့ဟာ 2400 ကြယ်ပွင့်စာသင်ခန်းထက် ပို. နှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုအတွက်အတွေ့အကြုံ 40 နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ၏ရေရှည်တည်တံ့ချဲ့ထွင်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမောင်းထုတ်ရန်ရှာဖွေနေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများထားရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိခြင်းလျှင်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်သင့်တယ် သစ်ကြံပိုးဟိုတယ် & Resorts အတူ။ သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်နေကြလို့ပဲ။
အဆိုပါဟိုတယ်ကိုဖြစ်ပါသည် လူနေမှုပုံစံစတဲ့အမျိုးအစားမျိုး သီရိလင်္ကာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အအမှတ်တံဆိပ်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာသင်ကခေတ်ပြိုင်အာရှအတွေ့အကြုံကယ်နှုတ်တော်မူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကောင်းလှ၏။
ဒီအဖွဲ့အစည်းကနှင့်အတူ, မူလတန်းအာရုံစိုက်လုပ်သားများအပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခံစားရန်ရှာကြသည်လျှင်။ သင်ဤကုမ္ပဏီသို့ရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤသည်ဟိုတယ်, အာရှရှိတစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ သင်သစ်ကြံပိုးဟိုတယ်နှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start စဉ်တွင်သင်တို့ကိုသစ်ကြံပိုးခေါက်နဲ့ဘုံရူပါရုံကိုဝေမျှဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူအကြံပေး သူတို့နှင့်အတူ။
အဓိကအကြောင်းအရာ Resort & Spa အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
Srilanka မှာတော့အမြဲရှိ ထူးခြားသောလူတို့အဘို့ရာအရပျ။ အထူးသဖြင့်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ သင်သည်ထိုသူတို့တဦးနှင့်အလုပ်ရှာနေရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျအဓိကအကြောင်းအရာ Resort & Spa ရန်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုရည်စူးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်ကန်ထမ်း orientated ရောင်းအားလျှင်။
အဆိုပါဆောင်ပုဒ် Resort & Spa ။ အဆိုပါ Theme အသိပညာစက်မှုလုပ်ငန်းစုံလင်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဟိုတယ်လုပ်ငန်းခိုင်မာတဲ့အသိပညာရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်။ သင့်ရဲ့ updated CV ကိုအတူ Apply။ ထို့အပွငျအခွားသူမြားအားအစေခံရန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကလူကဒီအပန်းဖြေစခန်းအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီ မြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအားပေးအားမြှောက်။ ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့ရန်သင့်ရာရာခိုင်နှုန်းကွာပေးလျှင်။ သင်သည်ထိုစကားလုံးမဆိုအသိထဲမှာဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့က အပြည့်အဝပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီပေး။ အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးမှအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေးမှတက်လမ်းညွှန်သင်ပြ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များကိုပင်မြင့်မားသောရောက်ရှိဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အား။ နိုင် သူတို့ရဲ့ website တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုက c အဆင့်အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်လျှောက်ထား.
နားလည်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အခြားသူများကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူဆိတ်ကွယ်ရာပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ကတည်းကမရတိုင်း လူတစ်ဦးဖောက်သည်များအတွက်သဘောထားကိုနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ပြပေး။ သငျသညျ Rthe esort ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွင်းမြင့်မားတဲ့အလားအလာရှိနိုင်ပါသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အလွန်ကောင်း။
တောင်ပေါ်က Lavina ဟိုတယ်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်
တောင်ပေါ် Lavina ဟိုတယ် အားကြီးသောအစဉ်အလာရှိခြင်း သီရိလင်္ကာ၌တည်၏။ သငျသညျဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်တစ်တောင်ပေါ်မှာ Lavinia ဟိုတယ်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဤသည်ဟိုတယ်က၎င်း၏ကိုလိုနီအမွေအနှစ်သူ၏အမွေအတွက်လည်းလူသိများသည်။ ထိုမှတပါး, ဤမျှလောက်များစွာသောအံ့သြဖွယ်သောလူရှိပါတယ် သောဤအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သီရိလင်္ကာတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကခိုင်မာတဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှေးဝမျးကြောငျးအဘို့ရှာကြသည်လျှင်။ သငျသညျက၎င်း၏အဖွဲ့သည်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါသည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဖြစ်လာဆက်ကပ်အပ်နှံန်ထမ်း.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျဟိုတယ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အစစ်အမှန်အာဏာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ် Lavina ဟိုတယ်, သီရိလင်္ကာမှာအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်ဟိုတယ်စေပြီ။ ဟိုတယ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကကြီးမားသောရှိပါတယ်ယုံကြည်သည် ဦးတည်တာဝန် သူတို့ကို။ ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းနေပါစေလက်ရှိတွင်ဟိုတယ်ထဲမှာသွားဘာအရပျ၌ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရာအားလုံးရာအရပျမြားနှငျ့လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ရပါမည် အလုပ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စူပါခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ရမယ် ဟိုတယ်အတွက်အဆင့်အထိ။
အဓိကကဟိုတယ်ရဲ့အတွေးအခေါ်ဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းလေ့ကျင့်အပေါ်အခြေခံသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်စကားပြော သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်လမ်းပိုကောင်း။ ၀ န်ထမ်းအများစုကဟိုတယ်၏အလားအလာသည်အဓိကဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာ မန်နေဂျာ'' s ကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်အသင်းကို။ အများကြီးမဟုတ်အမှုအရာတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုထပ်မံန်ထမ်းများအတွက်, အသစ်ကလေ့ကျင့်ရေးများကိုဖွစျလိမျ့မညျဃ။ သငျသညျအဖွဲ့ join ကတည်းကသူတို့ကိုသင်ဖို့အများကြီးကိုငါပေးမည်။ သင်တို့မူကားအသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များကကျယ်ပြန့်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များလိမ့်မည်ကြောင်းသူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းရှိဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့သင်တန်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ ကျိန်းသေသီရိလင်္ကာဟိုတယ်များအတွက်ဂျော့ဘ် အသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေ။ သငျသညျသီရိလင်္ကာရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေပါသည်အထူးသဖြင့်ပါ။ ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တစ်ခုပြည်ပရှိတနေ့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသီရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းအဖြစ်ကယ့်ကိုအေးမြသောနေရာတွင် သို့မဟုတ်အတွက်အဘူဒါဘီ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သီရိလင်္ကာတွင်ဟိုတယ်အလုပ်စတင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် အလုပ်သမားနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြ, အကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။